“ဘောလုံးမှာ သစ္စာတရားဆိုတာ မရှိ ၊ လီဗာပူးပင် ဂျရတ်ကို ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ဖူး” – မိုက်ကယ်အိုဝင် - SPORTS MYANMAR
“ဘောလုံးမှာ သစ္စာတရားဆိုတာ မရှိ ၊ လီဗာပူးပင် ဂျရတ်ကို ရောင်းဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ဖူး” – မိုက်ကယ်အိုဝင်
မိုက်ကယ် အိုဝင် ရဲ့ စာအုပ် သစ် ကတော့ မိတ်ဆွေ ထက် ရန်သူ တွေကို ပိုပြီး များပြား လာစေ မလား မသိ ပါဘူး ။ Reboot လို့ အမည် ပေးထား တဲ့ စာအုပ် ကို ယမန်နေ့ က စတင်ဖြန့်ချီ ခဲ့ပြီး ရှေ့ တစ်ပတ် လောက် ကတည်းက နယူးကာဆယ် ၊ အလန်ရှီးယား ၊ ကာပယ်လို ၊ ဘက်ခမ်း ၊ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် တို့ အကြောင်းတွေ ကို စာမြည်း အဖြစ် အပိုင်း အချို့ ကို သတင်း ဌာန တွေ က ဖော်ပြ ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒီ တစ်ခါ မှာတော့ မိုက်ကယ် အိုဝင် ဟာ ဘောလုံး လောက ရဲ့ သစ္စာ ရှိမှုတွေ အပေါ် မေးခွန်း ထုတ်သွားခဲ့ ပြီး အားကစား ကို စီးပွားရေး လုပ်နေတဲ့ ကလပ် အသင်းတွေ မှာ သစ္စာ တရား ဆိုတာ မရှိ ပါဘူး လို့ ဆိုသွား ခဲ့ ပါတယ် ။ ယနေ့ အချိန်မှာ ကလပ် တွေ ဟာ ကစား သမားတွေ ကို မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရောင်းထုတ် နေကြပြီး ယခင် ကတည်းက လည်း ဒါမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ် လို့ အိုဝင် က ဆိုခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ဟာ အသင်းမှာ ကစား သမား ဘ၀ တစ်လျောက် လုံး နီးပါး ကစားခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င် အသင်း ခေါင်းဆောင် စတီဗင် ဂျရတ် ကို ပင် ရောင်းထုတ် ဖို့ စိတ်ကူး ခဲ့ဖူး သလို ရိုင်ယန်ဂစ် ၊ ပေါလ်စခိုး တို့ ဘာကြောင့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာပဲ တစ်သက်လုံး ကစားခဲ့ ကြသလဲ ဆိုတာ ကိုလည်း သုံးသပ် ရေးသား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စတီဗင် ဂျရတ် ဟာ လီဗာပူး ကို အလွန် ချစ်မြတ်နိုး ခဲ့ပြီး လူငယ် ကစား သမား ဘ၀ ကနေ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာအောင် ကစားခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ် ။ အသင်း က အောင်မြင်မှုတွေ နဲ့ ဝေးကွာ နေချိန် မှာတောင် ပိုကောင်းတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု တွေကို ငြင်းပယ် ခဲ့တဲ့ ဂျရတ် ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မှာတော့ မေဂျာလိဂ် ကလပ် LA Galaxy ကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ပြီး ၁၇ နှစ် ကြာ အန်ဖီးလ် ကစား သမား ဘ၀ ကို အဆုံးသတ် ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အိုဝင် ကတော့ လီဗာပူး ဟာ ဂျရတ် ရဲ့ သစ္စာ ရှိမှု ကို ရောင်းထုတ်ခြင်း နဲ့ ပြန်လည် ပေးဆပ် ခဲ့ပြီး အမေရိက ကို မပြောင်းခင် ၂ နှစ် အလိုတုန်းက ရောင်းထုတ် ဖို့ စီစဉ် ခဲ့ဖူးတယ် လို့ ဖွင့်ဟ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“စတီဗင် ရဲ့ ကိစ္စ တုန်းက သူ ဟာ တကယ်ပဲ အမေရိက ကို သွားပြီး ကစားချင် ခဲ့ သလား ဆိုတာ ကျွန်တော် သံသယ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲ့ မတိုင်ခင် ၂ နှစ် လောက် တုန်း က လီဗာပူး ဟ သူ့ကို ရောင်းထုတ် ဖို့ စီစဉ် ခဲ့လို့ ပါပဲ”
“စတီဗင် ဟာ အသက်အရွယ် ကြောင့် လီဗာပူး မှာ တဖြည်းဖြည်း ပွဲ ကစားမှု နည်းလာမယ် ၊ ဒါပေမယ့် အသင်းမှာ ဆက်ရှိ နေပြီး နောက်ဆုံး မှာ အသင်းရဲ့ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ် ၊ နောက်ပိုင်း မှာ နည်းစနစ် ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့မှာ နေရာ တစ်ခုခု အဖြစ် နဲ့ ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင် သွားမယ် . . . ဒါတွေ ဟာ အသင်း အပေါ် သစ္စာ ရှိသူတွေ ကို ပြန်လည် တုန့်ပြန် တဲ့ နည်းလမ်း ကောင်း တစ်ခုပါ”
“ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကြားခဲ့တာ ကတော့ တကယ် စိတ်ပျက် စရာ ပါပဲ ။ ဘောလုံး မှာ သစ္စာ တရား ဆိုတာ အလကားပါ ။ အဲ့ အချိန်တုန်းက စတီဗင် ဟာ လီဗာပူး ထက် တောင် ပို ကျော်ကြား နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူ ဆက်ရှိ နိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ် မှာပါ” လို့ အိုဝင် က ပြောဆို ခဲ့ ပါတယ် ။
ဆက်လက်ပြီး မိုက်ကယ် အိုဝင် က သူ့ရဲ့ ဘ၀ မှာ ကလပ် အသင်း တစ်သင်းတည်း မှာ ကစား သမား ဘ၀ စတင်ပြီး ကုန်ဆုံး ခဲ့တဲ့ one-clubbed man များစွာ နဲ့ ဆုံခဲ့ ဖူးကြောင်း ၊ ဒီ အထဲ က အချို့ ဟာ အသင်း မပြောင်းလိုတာ ထက် လက်ရှိ အသင်းထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာ မရှိနိုင် တာ ကြောင့် အသင်းမပြောင်း ဖြစ်ကြတာ က ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ထင်မိ ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ကလပ် အသင်း တစ်သင်း တည်းမှာ ကစားခဲ့ တိုင်း သစ္စာ ရှိတယ် လို့ မှတ်ယူ လို့ မရ ပါဘူး ။ ဥပမာ ပေးရ မယ် ဆိုရင် ရိုင်ယန်ဂစ် နဲ့ ပေါလ် စခိုး တို့ပါ ။ သူတို့ ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာပဲ ကစားခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ အမြင် မှာတော့ သူတို့ ဟာ ယူနိုက်တက် အပေါ် သစ္စာ ရှိတယ် ဆိုတာထက် ယူနိုက်တက် ထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာ ကို ရှာ မတွေ့ နိုင်တာ ကြောင့် ဆက်နေခဲ့ တာက ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ အချိန်တုန်းက ယူနိုက်တက် ဟာ တကယ်ကို နေချင် စရာ ဖြစ်နေခဲ့တာကိုး” လို့ အိုဝင် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ဘောလုံးမှာ သစ်စာတရားဆိုတာ မရှိ ၊ လီဗာပူးပငျ ဂရြတျကို ရောငျးဖို့ စိတျကူးခဲ့ဖူး” – မိုကျကယျအိုဝငျ
မိုကျကယျ အိုဝငျ ရဲ့ စာအုပျ သဈ ကတော့ မိတျဆှေ ထကျ ရနျသူ တှကေို ပိုပွီး မြားပွား လာစေ မလား မသိ ပါဘူး ။ Reboot လို့ အမညျ ပေးထား တဲ့ စာအုပျ ကို ယမနျနေ့ က စတငျဖွနျ့ခြီ ခဲ့ပွီး ရှေ့ တဈပတျ လောကျ ကတညျးက နယူးကာဆယျ ၊ အလနျရှီးယား ၊ ကာပယျလို ၊ ဘကျခမျး ၊ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျ တို့ အကွောငျးတှေ ကို စာမွညျး အဖွဈ အပိုငျး အခြို့ ကို သတငျး ဌာန တှေ က ဖျောပွ ပေးခဲ့ပွီး ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒီ တဈခါ မှာတော့ မိုကျကယျ အိုဝငျ ဟာ ဘောလုံး လောက ရဲ့ သစ်စာ ရှိမှုတှေ အပျေါ မေးခှနျး ထုတျသှားခဲ့ ပွီး အားကစား ကို စီးပှားရေး လုပျနတေဲ့ ကလပျ အသငျးတှေ မှာ သစ်စာ တရား ဆိုတာ မရှိ ပါဘူး လို့ ဆိုသှား ခဲ့ ပါတယျ ။ ယနေ့ အခြိနျမှာ ကလပျ တှေ ဟာ ကစား သမားတှေ ကို မွနျမွနျ ဆနျဆနျ ရောငျးထုတျ နကွေပွီး ယခငျ ကတညျးက လညျး ဒါမြိုးတှေ ရှိခဲ့တယျ လို့ အိုဝငျ က ဆိုခဲ့ ပါတယျ ။
လီဗာပူး ဟာ အသငျးမှာ ကစား သမား ဘဝ တဈလြောကျ လုံး နီးပါး ကစားခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျ အသငျး ခေါငျးဆောငျ စတီဗငျ ဂရြတျ ကို ပငျ ရောငျးထုတျ ဖို့ စိတျကူး ခဲ့ဖူး သလို ရိုငျယနျဂဈ ၊ ပေါလျစခိုး တို့ ဘာကွောငျ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ မှာပဲ တဈသကျလုံး ကစားခဲ့ ကွသလဲ ဆိုတာ ကိုလညျး သုံးသပျ ရေးသား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
စတီဗငျ ဂရြတျ ဟာ လီဗာပူး ကို အလှနျ ခဈြမွတျနိုး ခဲ့ပွီး လူငယျ ကစား သမား ဘဝ ကနေ နှဈပေါငျး မြားစှာ ကွာအောငျ ကစားခဲ့ သူဖွဈပါတယျ ။ အသငျး က အောငျမွငျမှုတှေ နဲ့ ဝေးကှာ နခြေိနျ မှာတောငျ ပိုကောငျးတဲ့ ကမျးလှမျးမှု တှကေို ငွငျးပယျ ခဲ့တဲ့ ဂရြတျ ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈ မှာတော့ မဂြောလိဂျ ကလပျ LA Galaxy ကို ပွောငျးရှေ့ ခဲ့ပွီး ၁၇ နှဈ ကွာ အနျဖီးလျ ကစား သမား ဘဝ ကို အဆုံးသတျ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အိုဝငျ ကတော့ လီဗာပူး ဟာ ဂရြတျ ရဲ့ သစ်စာ ရှိမှု ကို ရောငျးထုတျခွငျး နဲ့ ပွနျလညျ ပေးဆပျ ခဲ့ပွီး အမရေိက ကို မပွောငျးခငျ ၂ နှဈ အလိုတုနျးက ရောငျးထုတျ ဖို့ စီစဉျ ခဲ့ဖူးတယျ လို့ ဖှငျ့ဟ သှားခဲ့ ပါတယျ ။
“စတီဗငျ ရဲ့ ကိစ်စ တုနျးက သူ ဟာ တကယျပဲ အမရေိက ကို သှားပွီး ကစားခငျြ ခဲ့ သလား ဆိုတာ ကြှနျတျော သံသယ ရှိခဲ့ ပါတယျ ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အဲ့ မတိုငျခငျ ၂ နှဈ လောကျ တုနျး က လီဗာပူး ဟ သူ့ကို ရောငျးထုတျ ဖို့ စီစဉျ ခဲ့လို့ ပါပဲ”
“စတီဗငျ ဟာ အသကျအရှယျ ကွောငျ့ လီဗာပူး မှာ တဖွညျးဖွညျး ပှဲ ကစားမှု နညျးလာမယျ ၊ ဒါပမေယျ့ အသငျးမှာ ဆကျရှိ နပွေီး နောကျဆုံး မှာ အသငျးရဲ့ နညျးပွ အဖှဲ့ဝငျ တဈယောကျ ဖွဈလာမယျ ၊ နောကျပိုငျး မှာ နညျးစနဈ ဒါရိုကျတာ ဖွဈဖွဈ အဖှဲ့မှာ နရော တဈခုခု အဖွဈ နဲ့ ဆကျပွီး လုပျဆောငျ သှားမယျ . . . ဒါတှေ ဟာ အသငျး အပျေါ သစ်စာ ရှိသူတှေ ကို ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျ တဲ့ နညျးလမျး ကောငျး တဈခုပါ”
“ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော ကွားခဲ့တာ ကတော့ တကယျ စိတျပကျြ စရာ ပါပဲ ။ ဘောလုံး မှာ သစ်စာ တရား ဆိုတာ အလကားပါ ။ အဲ့ အခြိနျတုနျးက စတီဗငျ ဟာ လီဗာပူး ထကျ တောငျ ပို ကြျောကွား နပေါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ သူ ဆကျရှိ နိုငျ ခဲ့တာ ဖွဈကောငျး ဖွဈ မှာပါ” လို့ အိုဝငျ က ပွောဆို ခဲ့ ပါတယျ ။
ဆကျလကျပွီး မိုကျကယျ အိုဝငျ က သူ့ရဲ့ ဘဝ မှာ ကလပျ အသငျး တဈသငျးတညျး မှာ ကစား သမား ဘဝ စတငျပွီး ကုနျဆုံး ခဲ့တဲ့ one-clubbed man မြားစှာ နဲ့ ဆုံခဲ့ ဖူးကွောငျး ၊ ဒီ အထဲ က အခြို့ ဟာ အသငျး မပွောငျးလိုတာ ထကျ လကျရှိ အသငျးထကျ ပိုကောငျးတဲ့ နရော မရှိနိုငျ တာ ကွောငျ့ အသငျးမပွောငျး ဖွဈကွတာ က ပိုပွီး ဖွဈနိုငျတယျ လို့ ထငျမိ ကွောငျး ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
“ကလပျ အသငျး တဈသငျး တညျးမှာ ကစားခဲ့ တိုငျး သစ်စာ ရှိတယျ လို့ မှတျယူ လို့ မရ ပါဘူး ။ ဥပမာ ပေးရ မယျ ဆိုရငျ ရိုငျယနျဂဈ နဲ့ ပေါလျ စခိုး တို့ပါ ။ သူတို့ ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ မှာပဲ ကစားခဲ့ကွ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတော့ အမွငျ မှာတော့ သူတို့ ဟာ ယူနိုကျတကျ အပျေါ သစ်စာ ရှိတယျ ဆိုတာထကျ ယူနိုကျတကျ ထကျ ပိုကောငျးတဲ့ နရော ကို ရှာ မတှေ့ နိုငျတာ ကွောငျ့ ဆကျနခေဲ့ တာက ပိုပွီး ဖွဈနိုငျတယျ လို့ ထငျပါတယျ ။ အဲ့ အခြိနျတုနျးက ယူနိုကျတကျ ဟာ တကယျကို နခေငျြ စရာ ဖွဈနခေဲ့တာကိုး” လို့ အိုဝငျ က ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။